Zanu PF neMDC Dzopindwa neMakakatanwa Makuru
MuZanu-PF munonzi maita kusawrirana kwakanyanya pakati pevakuru vebato zvichikonzerwa nenyaya yekusungwa kwaVaTemba Mliswa, avo vaive munyori wezvekurima mubato iri kuMashonaland West.
VaMliswa, avo vari mutirongo, vanoti mukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, pamwe naAmai Jocelyn Chiwenga, mudzimai waVaConstantine Chiwenga, vakatenga dzimwe pombi dzavanonzi vakaba kuvachena. Zvinonzi gurukota remuhofisi maVaMugabe, VaDidymus Mutasa, vari kudivi raVaMliswa, uye vatove makara asionane naVaChihuri, VaChiwenga nevamwe vakuru vebato iri nenyaya iyi.
Mwana maVaMutasa, Martin, akasungwa pamwe chete naVaMliswa. VaChihuri vanoti vari kuronga kuendesa VaMliswa kumatare nekusvibisa zita ravo kwavanoti vakaita.
Nyanzvi munyaya dzemitemo, VaDewa Mavhinga, avo vanoshanda ne Crisis in Zimbabwe Coalition, vanoti nyaya yaVaChihuri ihuku yava kudya mazai ayo.
Zvinhu zvinonziwo zvakaita manyama amire nerongo muMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, mushure mekubuda kwemashoko ekuti mutungamiri webato iri, varizve mutungamiri wehurumende, vari kuronga kuvandudza zvakare mafambisirwo emabasa muhofisi mavo.
Pane mashoko ekuti mutauriri waVaTsvangirai, VaJames Maridadi, vangangobviswa pabasa iri, vachitsiviwa naVaLuke Tamborinyoka, mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato iri.
Asi VaMaridadi varamba mashoko aya. Zvinonzi mubato iri zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo pasina kuwirirana panyaya yaVaMaridadi iyi, vamwe vachiti vari kutsigirwa nechikwata chaVaIan Makone, munyori muhofisi yaVaTsvangirai.
VaTsvangirai vaita musangano neChina nenhengo dzeparamende vachitsanangura nezvekumisa kwavo mamwe makurukota ebato iri basa.
Vakamiswa basa vanosanganisira vaimbove gurukota rezvemagetsi, Engineer Elias Mudzuri, vaimbove gurukota rezvekuvakwa kwedzimba, VaFidelis Mhashu, vaiva mutevedzeri wegurukota rezvemadzimai, Amai Evelyn Masaiti, pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvechidiki, Va Tamsanqa Mahlangu. VaTsvangirai vanoti vakaendesa vanhu ava kumusangano kuitira kuti vashandire bato.
Vamwe mubato vange vachinyunyuta nemaitirwo akaitwa izvi, uye nyaya yekuti VaTsvangirai havana zvavari kuita kuna Amai Makone, avo vanonzi vaida kuburitsa muhusungwa mwana waVaDidymus Mutasa, ainge asungirwa nyaya yehuori.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisayi Ruhanya, vanoti VaTsvangirai vanofanira kugadzirisa nyaya yaAmai Makone, kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mubato ravo.